BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/02/20140အကြံပြုခြင်း
စိန်ဖူးတော် ကိုင်ဆောင်သူဟာ ရန်ကုန်က မန္တလေးအထိ လမ်းလျှောက်ပြီး ပင့်မယ်ဆိုပါစို့... ဖိနပ်ချွတ်ပြီးပဲ ပင့်ဆောင်ရပါမယ်။ ကိုယ့်ထက် အသက်သိက္ခာကြီးတဲ့ ဆရာတော်တွေကို ခေါင်းရိတ်ပေးရင် ဘယ်လိုနေရာမှာဖြစ်ဖြစ် ဂါရဝတရားကို ဦးထိပ်ထားပြီး ဖိနပ်ကိုချွတ်ပြီးမှ ခေါင်းရိတ်ပေးပါတယ်။ ဆရာသမား ထိုင်တဲ့၊ ကျိန်းတဲ့ ဖျာပေါ်ဆိုရင် ခြေတဖဝါးစာ မချဖူးပါဘူး။ လမ်းတကြောင်းတည်းမှာ ဆရာတော်တပါး ကြွလာရင် ကိုယ်ရောက်တဲ့နေရာမှာ ရပ်လို့ဖြစ်စေ၊ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လို့ဖြစ်စေ လက်အုပ်ချီပြီး ကိုယ့်ခရီးကို ရပ်တန့်ပေးရပါတယ်။ ဒီလို အပြုအမူတွေဟာ ငယ်စဉ် ပုလုကွေးကတည်း ကျင့်ခဲ့ရတာပါ။ ဒီလို ကောင်းတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ တလွဲမာန်ကို လျှော့ကျစေတဲ့ အပြုအမူတွေဟာ ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေထံ ဆည်းကပ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သိန်းစိန်ဟာ စိန်ဖူးတော်ကိုင်မယ်ဆိုတာနဲ့ ဖိနပ်ချွတ်ပစ်ရပါမယ်။ စိန်ဖူးတော်ကိုင်ထားတဲ့လူဟာ ဖိနပ်ချွတ်လျက်သားပဲ ဖြစ်နေရပါမယ်။ ဒါကို မှူးဇော်က အမှားကို ဝန်မခံဘဲ လိုက်ဖာပေးနေတယ်။ ကိုယ့်အမှားကို အမှားလို့ ဝန်မခံရဲတဲ့သူတွေဟာ ဘယ်တော့မှ အမှန်ကို မြင်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ လူ့ဘိတ်တုန်း တခဏစံတွေ ငရဲပန်းကို နတ်ပန်းထင်နေကြတယ်။
Lay Lay Mon
ဇွန်လ ၂ရက်နေ့ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းမှာ လူ့အခွင့်အရေးဆုရ ဇာတ်ကား၉ကားကို ပြသဖို့အခမ်းအနားစီစဉ်ပြီးခါမှ မင်းကိုနိုင် ကို ကျောင်းအတွင်းဝင်ခွင့်မပြု တဲ့အပြင် အဖွင့်အမှာစကားပြောခွင့်မပေးတဲ့အတွက် သမဂ္ဂကျောင်းသားတွေကနေ မင်းကိုနိုင်ကို လေးစားမှုအဖြစ် အခမ်းအနားကို ဖျတ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်. ဇာတ်ကား ၉ကားထဲမှာ မင်းကိုနိုင်ဆုရဇာတ်ကားတို၊ အောင်ဆန်းစုကြည်မှတ်တမ်းကား၊ ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင် ဇာတ်လမ်းတို တို့ပါဝင်ပါတယ်. ရုပ်ရှင်ကားတွေကို ပြသခွင့်ပေးခဲ့ပေမယ့် မင်းကိုနိုင် ကိုတော့ ကျောင်းဝင်းအတွင်း ဘာကြောင့် ဝင်ခွင့်မပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျောင်းသား မကျေနပ်ခဲ့ကြ
ရေကြောင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား(ယခင်) ဓါတ်ပုံနေနိုင် ကနေ သူ့ရဲ့ Idea နဲ့ အီကိုကျောင်းသား ကျောင်းသူ အချို့ကို Performance လုပ်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးနေပုံ — at စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်(ရွာသာကြီး).
တရုတ်ပြည် အနောက်ပိုင်းမှာ မွတ်ဆလင်တွေ ဥပုသ် မစောင့်ရ ဆိုပြီး အမိန့်ထုတ်ပြန်
တရုတ်ပြည် အနောက်ပိုင်း ရှင်ကျန်း ပြည်နယ်မှာ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေရဲ့ ရာမဒန် ဥပုသ်လ အတွင်း မွတ်ဆလင်တွေ ဥပုသ် မစောင့်ရ ဆိုပြီး ဒေသခံ အာဏာပိုင်တွေက အမိန့်ထုတ်ပြန် တားမြစ်ထားပါတယ်။
ဒီလို တားမြစ်ခံရသူတွေထဲမှာ အဲဒီဒေသရဲ့ ဌာနေ ဝီဂါ မျိုးနွယ်စုဝင် အစိုးရ ဝန်ထမ်းတွေ၊ ကျောင်းဆရာတွေ၊ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီကာလအတွင်းမှာ တရုတ် အာဏာပိုင်တွေက အခမဲ့ နေ့လည်စာ ကျွေးမွေးတာမျိုးတွေတောင် လုပ်ခဲ့တယ်လို့ တရုတ်ပြည် ပြင်ပမှာ အခြေစိုက်တဲ့ ဝီဂါ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုက ပြောပါတယ်။
ဝီဂါတွေရဲ့ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို တရုတ် ခေါင်းဆောင်တွေက ဖျက်ဆီးနေကြတယ် လို့လည်း သူတို့က အပြစ်တင်ကြပါတယ်။
အချို့ကလည်း ဒီလို အခြေအနေတွေဟာ ရှင်ဂျန်း ပြည်နယ်မှာ လတ်တလော ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူမျိုးရေး အကြမ်းဖက်မှုတွေရဲ့ အကြောင်းခံ ဖြစ်တယ်လို့ ဝေဖန်ကြပါတယ်။
နယ်စပ်ခြံ စည်းရိုးကို လိုအပ်ပါကနည်းပညာ အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်သွား မည်
စစ်တွေ ဇူလိုင် ၁
ရခိုင်-ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ် အဖြစ်ကာရံထားသည့် နယ်စပ်ခြံ စည်းရိုးကို လိုအပ်ပါကနည်းပညာ အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်သစ် ဗိုလ်ချုပ်မောင် မောင်အုန်းကပြောသည်။
ဆက်လက်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်မောင် မောင်အုန်းက ''အနောက်ဘက် တံခါးက အလွန်အရေးကြီးတယ်။ ရခိုင်အရေးဟာ နိုင်ငံတော်အရေး ဖြစ်တယ်။ အခုအပစ်အခတ်ရပ်စဲ ရေးတွေအားလုံးပြီးလို့ တစ်နိုင်ငံ လုံးငြိမ်းချမ်းပြီး ရခိုင်အရေးကျန်ခဲ့ ရင်လဲ နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းမှာမဟုတ်ဘူး၊ ရခိုင်အရေးလဲ ငြိမ်းချမ်းရမယ်။ အခုရဟတ်ယာဉ်ပေးထားတာကလဲ လုံခြုံရေးကို အရေးကြီးရင်ကြီး သလိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် နိုင်ငံတော်ကစီမံပေးထားတာပါ။ တပ်မတော်နဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေမပူး ပေါင်းရင် အနောက်ဘက်တံခါးက ဘယ်လုံခြုံမလဲ။ ဒါကြောင့်ပြည်သူ တွေအနေနဲ့ တပ်မတော်နဲ့ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်''ဟု ပြော ကြားသည်။
အနောက်ဘက်တံခါးလုံခြုံရေး ကို အဓိကထားဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ပြီး ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် အနောက်ဘက်တံခါးလုံခြုံရေး အတွက် ခေါင်းထဲထည့်စရာမလို ကြောင်း၊ တပ်မတော်အနေဖြင့် လည်း မိမိတို့မြေကိုကျူးကျော်လာ မှုများကို ခေါင်းငုံ့ခံမည်မဟုတ် ကြောင်းကို ပြည်သူများအနေဖြင့် လည်း စိတ်ချယုံကြည်ထားရန်လို ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်အုန်း ကပြောကြားခဲ့သည်။ ၁၆၉ မိုင် ရှည်လျားသည့် အနောက်နယ်စပ် ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းကို တပ်မတော် အစိုးရလက်ထက်မှစတင်ဆောင် ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယနှင့် ပါကစ္စတန် နယ်စပ်ခြံစည်းရိုး ကာရံမှုအတိုင်းဆောင်ရွက်ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ဘင်္ဂါလီ ၁၂ ဦးအား တရားခံပြေးအဖြစ် ကြေညာထားပြီး ဖမ်းဆီးရမိ ဘင်္ဂါလီ လေးဦးကို တရားစွဲဆို
မောင်တောမြို့နယ်အတွင်း လက်နက်ဖြင့် အုပ်စုလိုက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဘင်္ဂါလီ ၁၂ ဦးအား တရားခံပြေးအဖြစ် ကြေညာထားပြီး ဖမ်းဆီးရမိ ဘင်္ဂါလီ လေးဦးကို တရားစွဲဆိုထား
မောင်တောမြို့နယ်အတွင်း လက်နက်ဖြင့်အုပ်စုလိုက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ် နှင့်ပတ်သက်၍ ဘင်္ဂါလီ ၁၂ ဦးအား တရားခံပြေးအဖြစ် ကြေညာထားပြီး ဖမ်းဆီးရမိ ဘင်္ဂါလီလေးဦးကို တရားစွဲဆိုထားကြောင်း သတင်းရသည်။ မေ ၂၈ ရက် ညအချိန် မောင်တောမြို့နယ် တောင်ပိုင်းသင်္ဘောကွေ့ကျေးရွာတွင် လက်နက်ကိုင် အုပ်စုလိုက်ဝင်ရောက်ကာ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး မော်လဝီတစ်ဦး၊ ကျေးရွာအုပ်စုတာဝန်ခံနှင့် ၎င်း၏ဇနီးတို့အသတ်ခံရမှု၊ ရွာသားကိုးဦး ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရမှုဖြစ်စဉ်တွင် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူဟု သံသယရှိသူများကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့ရာ လေးဦးအား ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၃ဝ၂/၃၂၆/ ၃၂၄/၁၁၄ ဖြင့် မေ ၃ဝ ရက်မှ စတင်တရားစွဲဆိုထားပြီး မောင်တောမြို့နယ် တရားရုံးတွင် ပြစ်မှုဆိုင်ရာပြစ်မှုကြီးအမှတ် ၁၅/ ၂ဝ၁၄ အရ လက်ခံစစ်ဆေးနေကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိတရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုစစ်ဆေးနေသည့် ဘင်္ဂါလီလူမျိုး လေးဦးမှာ အီမန်ဟူဆောင်း၊ မော်ဝါဆူဟောက်၊ အဒူလာ နှင့် အဇီဇူဟောက်တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါအုပ်စုဖွဲ့ လက်နက်ကိုင်ကျူးလွန်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူဟု ယူဆရသော ဘင်္ဂါလီ ၁၂ ဦးအား ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၃ဝ၂/၃၂၆/၃၂၄/ ၁၁၄ ကျင့်ထုံးဥပဒေပုဒ်မ ၅၁၂ ဖြင့် တရားခံပြေးအဖြစ် ကြေညာကာ တရားစွဲတင်ထားကြောင်း သိရသည်။ မေ ၃ ရက် နံနက် ၁ နာရီခန့်က မောင်တောမြို့နယ် သင်္ဘောကွေ့ကျေးရွာတွင် လက်နက်ကိုင်များက ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းသို့ လာရောက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် သင်္ဘောကွေ့ ကျေးရွာအုပ်စုတာဝန်ခံ ဇော်ကော်ရီယာ အသက် (၄၃)နှစ်နှင့် ဇနီးဖြစ်သူ ဟာလီမာခါတူတို့နှင့် ကျေးရွာရှိ မော်လဝီတစ်ဦးလည်း အသတ်ခံခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ တိုက်ခိုက်ခံရ၍ ဒဏ်ရာရသူ ကိုးဦးမှာ မောင်တောမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် အတွင်းလူနာအဖြစ် ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ မောင်တောမြို့နယ် သင်္ဘောကွေ့ကျေးရွာ တိုက်ခိုက်မှုမှာ ပစ္စည်းရလိုခြင်းထက် လူသတ်ရန် ရည်ရွယ်လာရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အခင်းဖြစ်ပွားရာ ကျေးရွာသားများက ပြောကြားသည်။ မောင်တောမြို့နယ်အတွင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ လက်နက်ကိုင်များ ဝင်ရောက်နေသည်ဟု သတင်းထွက်ပေါ်နေခဲ့ပြီး လက်နက်များဖမ်းဆီးရရှိမှုများ ရှိခဲ့သည်။ ယင်းနောက်ပိုင်းတွင် တိုင်းရင်းသားများအား တိုက်ခိုက်မှုများရှိခဲ့ပြီး လက်နက်ဖြင့် အုပ်စုလိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုမှာ ယခုနှစ်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။
အစိုးရနှင့် တပ်မတော်က သိမ်းဆည်းထားသည့် လယ်ယာမြေဧက စုစုပေါင်း ၄၇၀၀၀၀ ကျော်အနက် ဧက ၃၅၀၀၀၀ ကျော်အား အသုံးပြုရန်လိုအပ်၍ စွန့်လွှတ်မည်မဟုတ်ကြောင်း သမ္မတက လွှတ်တော်သို့ သ၀ဏ်လွှာပေးပို့
အစိုးရစီမံကိန်းများ၊ တပ်မတော်နှင့် ပုဂ္ဂလိကမှ သိမ်းဆည်းထားသည့် လယ်ယာမြေဧက စုစုပေါင်း ၄၇၀၀၀၀ ကျော်အနက် ဧက ၃၅၀၀၀၀ ကျော်အား အသုံးပြုရန် လိုအပ်သည့်အတွက် စွန့်လွှတ်မည်မဟုတ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယကထံသို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတက သ၀ဏ်လွှာပေးပို့ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ သ၀ဏ်လွှာတွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ပေးပို့ခဲ့သည့် လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခံရမှုကြောင့် ပြည်သူများနစ်နာမှု မရှိစေရေး စုံစမ်းရေးကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာ ၁၊ ၂၊ ၃ တွင် ပါရှိသည့် အမှုများအား စိစစ်ပြီးရှင်းလင်းရန် ၆၉၉ မှုရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
နေပြည်တော်အပါအ၀င် တိုင်းဒေသကြီးများနှင့် ပြည်နယ်များတွင် ဖြေရှင်းရန်အမှု ၆၉၉ မှုရှိကြောင်း၊ ယင်းတို့အနက် ဖြေရှင်းရန် စုစုပေါင်းဧကမှာ ၄၇၃၉၇၉ ဒသမ ၇၃၉ ဖြစ်ကြောင်း၊ အသုံးပြုရန် လိုအပ်ချက်အရ မစွန့်လွှတ်သည့် မြေဧက ၃၅၁၇၃၃ ဒသမ ၇၃၈ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သိမ်းဆည်းထားသည့် မြေဧကများအနက် အသုံးပြုရန်ထက် ပိုမိုမှုကြောင့် စွန့်လွှတ်သည့်မြေဧက ၄၃၇၁၇ ဒသမ ၇၄၀ အနက် ၂၆၅၆၉ ဒသမ ၅၂၀ ဧကသည် လွှဲပြောင်းပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ အသုံးမပြု၍ ပြန်လည်စွန့်လွှတ်သည့် မြေဧက ၂၈၉၆၈ ဒသမ ၄၆၁ ဧကဖြစ်ပြီး ၂၄၅၂၄ ဒသမ ၆၂၀ ဧက လွှဲပြောင်းပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ပုဂ္ဂလိက အချင်းချင်းနှင့် တရားစီရင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်အရ ရှင်းလင်းရန် မြေဧကမှာ ၄၉၂၄ ဒသမ ၇၂၀ ဖြစ်ကြောင်း သ၀ဏ်လွှာတွင် ဖော်ပြထားချက်များအရ သိရသည်။
ပြန်လည်စွန့်လွှတ်ခြင်း မပြုဘဲ အသုံးပြုရန် လိုအပ်သည့် မြေဧကများအား နိုင်ငံပိုင် စီမံကိန်းများ၊ တပ်မတော်တပ်ဖွဲ့များ၊ စိုက်မွေးခြံများအတွက် သိမ်းဆည်းပြီး သုံးစွဲရန် လိုအပ်သည့်အတွက် ဧက ၃၅၁၀၃၃ ဒသမ ၇၃၈ ဧကအား လွှဲပြောင်းပေးမည် မဟုတ်ကြောင်း၊ လျော်ကြေးပေးကာ ညှိနှိုင်းပြီး ဆက်လက်အသုံးပြုနေသည့် ဧက ၇၀၀ ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
အသုံးပြုရန်ထက် ပိုမိုနေသည့်အတွက် စွန့်လွှတ်မြေဧကများတွင် နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းများအတွက် သိမ်းဆည်းခဲ့သည့် ဧကပေါင်း ၉၅၂၀၅ ဒသမ ၆၁၀ အနက် ၄၃၇၁၇ ဒသမ ၇၄၀ ဧက စွန့်လွှတ်မည်ဖြစ်ကာ ယင်းတို့အနက် ၂၆၅၆၉ ဒသမ ၅၂၀ ဧက လွှဲပြောင်းပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ထို့အပြင် အစိုးရဌာနများနှင့် တပ်မတော်တ ပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များမှ ပြန်လည်စွန့်လွှတ်သည့် မြေများကို တိုင်ကြားတောင်းခံသူများထံ ရောက်ရှိရန်အတွက် ဒုတိယသမ္မတမှ နယ်မြေများသို့ ကွင်းဆင်းလျက်ရှိကြောင်း၊ သက်ဆိုင်သူများက ဆက်သွယ်တောင်းခံလာခြင်း မရှိသည့် ကိစ္စရပ်များ ကျန်ရှိကြောင်း သမ္မတ၏ သ၀ဏ်လွှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမြင့်သိန်းက “ကျွန်တော်တို့ လွှတ်တော်က ပေးပို့ခဲ့တဲ့ အမှုတွဲတွေကို ပြီးပြတ်အောင် ရှင်းလင်းပြီးပြီလို့ ဖြေကြားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အောက်ခြေမှာက မရကြသေးဘူး။ တချို့လယ်မြေတွေကို အရင်က ကျပ် ၅၀၀၀ နဲ့ လျော်ပြီးလို့ ထပ်မလျော်နိုင်ဘူးလို့ ကြားရတာတွေ ရှိပါတယ်။ ပြင်ပက ကာလပေါက်ဈေးနဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါမှ တောင်သူတွေအတွက်လည်း နစ်နာမှုတွေ အထိုက်အလျောက် ရမှာပါ” ဟု ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိန်ဝင်းက “အခု ပြည်ထဲရေးဒုဝန်ကြီး လာဖြေတာနဲ့ အောက်ခြေမှာ ဖြစ်နေတာတွေ ကွာခြားနေပါတယ်။ မူလလယ်သမားက ခံစားခွင့် ဘာမှမရဘဲ လယ်မြေကို သိမ်းသွားတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေက ပြန်လုပ်ခွင့်တွေ ပေးထားတဲ့ လယ်သမားတွေက ခံစားခွင့်ရနေကြတယ်။ မြေသိမ်းဥပဒေနဲ့ မညီဘဲ သိမ်းခဲ့တာတွေကို အခုကာလပေါက်ဈေးတွေနဲ့ ပေးလျော်သင့်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
ထို့အပြင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များကလည်း သိမ်းဆည်းခံခဲ့ရသည့် မူလပိုင်ရှင်များအား နစ်နာကြေးများကို ကာလပေါက်ဈေးဖြင့် လျော်ပေးသင့်ကြောင်း၊ တာဝန်ရှိသူများ အနေဖြင့် အောက်ခြေအထိဆင်းပြီး ပြည်သူများ၏ နစ်နာမှုများကို လေ့လာသင့်ကြောင်း၊ မူလပိုင်ရှင်များက ခံစားခွင့် မရရှိကြသည့် ဖြစ်စဉ်များစွာရှိနေကြောင်း ပြောကြားသည်။
သခင်တင်မြ သို့မဟုတ် မိမိ ယုံကြည်ချက်ဖြင့် �